सुन्दर बन्न अपनाउनुहोस् यी ५ टिप्स – News Dainik
सुन्दर बन्न अपनाउनुहोस् यी ५ टिप्स
News desk २५ माघ २०७५, शुक्रबार १२:०३ व्यक्तित्व प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । शारीरिक सुन्दरताले मानिसको व्यक्तित्वमा सकारात्मक प्रभाव पारिहेको हुन्छ । सुन्दर देखिनु भनेको अरूलाई सजिलै आफूतिर ध्यानाकर्षित गर्नु पनि हो । यसकारण, सकेसम्म आफू सुन्दर देखिऊँ भन्ने जो–कोहीको चाहना हुन्छ । यद्यपि, सुन्दर देखिन हेयर स्टाइलदेखि मेकअप र ड्रेसअपसम्म मिलेको हुनुपर्छ भन्ने धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ । अब जान्नुहोस्, सुन्दर देखिन आवश्यक टिप्स ।
१. छालामा निखार
२ सनब्लक/मोस्चराइजरको प्रयोग
नियमित मेकअप गर्नेले विशेष ध्यान पु-याउन आवश्यक छ । विशेषगरी, कामकाजी महिलाहरूले हलुका मेकअप गर्नु राम्रो हुन्छ । बाहिर हिँडिरहने महिलाले क्याजुअल लुगाअनुसारको मेकअप गर्दा प्राकृतिक देखिन्छ । यसका लागि लुगाको रङअनुसारको लिपिस्टिक र आइस्याडो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता चिज लगाउँदा वाटरपु्रफ, नटल्किने र प्राकृतिक देखिने खालको हुनु उचित हुन्छ । जहिले पनि ब्रान्डेड मेकअप सामान प्रयोग गर्नुपर्छ । सस्तोका नाममा बजारमा जताजतै पाइने मेकअप प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा छालामा समस्या आउने उच्च जोखिम रहन्छ ।
अघिल्लॊ अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा १ करोड २३ लाख, बीमा शुल्क १२ करोड १३ लाख
पछिल्लॊ सेञ्चुरी बैंकको नाफा ४४ करोड
धरहरासँगै पुरिएकी प्रशंसा : जसका लागि भूकम्प भाग्य बनेर आयो !
काठमाडौं । स्याङ्जाबाट काठमाण्डौ घुम्न आएकी दिदीलाई डूलाउन धरहरा पुगेकी प्रशंसा श्रेष्ठलाई आफ्नो कहालीलाग्दो विगत …